eFootball PES 2021 အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
4.3 | 100,000,000+ ထည့်သွင်းရန် | သုံးသပ်ချက်မျာ
ဒေါင်းလုပ် XAPK（1.7GB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် eFootball PES 2021
Efootball Pes 2021 Mobile (v5.4.0) ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဒီ update ကို install လုပ်ဖို့ OFF
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.9 GB အခမဲ့နေရာလွတ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ Download ကိုမစတင်မီသင်၏ကိရိယာပေါ်တွင်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောသုံးစွဲသူများထံမှအစီရင်ခံစာများကိုလက်ခံရရှိသည် Google Play သည်မှန်ကန်သော download အရွယ်အစားကိုအမြဲတမ်းမပြနိုင်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်သင် download progress bar သည် 100% အထိရောက်ရှိလာချိန်၌ပင်ခဏစောင့်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
ဖိုင်သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကိုမပြီးဆုံးပါကသင်ဂိမ်းကိုမစတင်နိုင်ပါ။ ဖိုင်ကို install လုပ်ဖို့နေရာအလုံအလောက်မရှိဘူးဆိုရင် update ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သင်၏ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်မှုပြပွဲတစ်ခုမှာ V5.4.0 update ကို 23:2021 တွင် download လုပ်သည့်အသုံးပြုသူများအားလုံး 05/23/2021 တွင် download လုပ်ပြီး Inbox ကိုဖွင့်ပြီး "Black Ball" အထူးအေးဂျင့်ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
■သင်၏လက်ဖဝါးတွင် console Soccer သည် Pes Pes Pes Pes Pes Pes နှင့် Wi3 221 တွင်အနိုင်ရသည့်အလွန်အမင်းဂုဏ်သိက္ခာရှိသော console gameplay ကိုယူပြီး, မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အကောင်းဆုံးဘောလုံးအတွေ့အကြုံကိုရရှိစေရန် "အကောင်းဆုံးအားကစားပွဲ" ဆုကိုရရှိရန်အနှစ်သာရအားဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ရိုမာ, ပွဲစဉ်အသစ်များဖြစ်ရပ်များ, ကစားသမားများ, ကလပ်အသင်းများနှင့်လိဂ်များနှင့်အတူမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူသီးသန့်မိတ်ဖက်များပါ0င်သည်။ Europe ၏အကောင်းဆုံး
■အချိန်နှင့်တပြေးညီအွန်လိုင်း multiplayer လုပ်ဆောင်နိုင်မှုနှင့်နီးစပ်သောသူငယ်ချင်းများကိုဆန့်ကျင်။ ထို့နောက်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ပိုမိုအားမြှင့်တင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်တည်းတွင် Matchedday နှင့်အခြားယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသော esports assports များ၌ကမ္ဘာကြီးကိုယူရန် Efootball Mode သို့သွားပါ။
legends များအလယ်တွင်နေထိုင်ပါ။ D. Beckham, F. Totti, D. Maradona, S. Gerrard, ဖာနန်ဒို, ဖာနန်ဒို, ဖာနန်ဒို, ဖာနန်ဒိုတာ, စနေ, တနင်္ဂနွေပွဲစဉ်များတွင်ပွဲစဉ်တွင်ပါ0င်သည့်ကစားသမားများအဖြစ်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤအထူးဗားရှင်းများသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ, ထူးခြားသောကဒ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျွမ်းကျင်မှုများတိုးပွားလာသည်။
■အပတ်စဉ်တစ်နေရာတည်းတွင်ပါ0င်သောပွဲစဉ်များ၌ပါ0င်သည့်ပွဲများမှဒေတာများကိုအပတ်စဉ်နှင့်အကောင်အထည်ဖော်သည် -Game ပိုမိုစစ်မှန်သောအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန် Live Update အင်္ဂါရပ်မှတဆင့်။ ဤနောက်ဆုံးသတင်းများသည်ကစားသမားအခြေအနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အဖွဲ့0င်များအပါအ0င်ဂိမ်း၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
* အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှု *
EFOOUTBALL PES 2021 ကိုဖွင့်ရန်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုလိုအပ်သည် သင်ဂိမ်းထဲကအများဆုံးရအောင်သေချာစေရန်တည်ငြိမ်သောဆက်သွယ်မှု။
အကယ်. သင်သည် Game Application ၏ဘာသာစကားချိန်ညှိချက်များကိုရွေးချယ်ပါက "Efootball Releven 2021" ကိုပြလိမ့်မည်။ အကယ်. သင်သည်ဂျပန်အပါအ0င်အခြားဘာသာစကားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါက "Efootball Pes 2021" ကိုပြလိမ့်မည်။
ဘာအသစ်လဲ eFootball PES 2021 5.6.0
playerမဲနှိုက်ရင် သုံးယောက်လောက်ပေးပြီး အာ့ထဲက ကြိုက်ရာတစ်ယောက်ကိုပေးရွေးသင့်တယ်။မလိုအပ်တဲ့လူတွေထပ်ထပ်ပေါက်လို့။။။
Make the Champions League ‌ When I did, the Lady Division grew stronger
Losoe Soe Lwin Lwin
The game lasts for3or4days inarow. It is difficult to find people. Is the game obsolete?